Mafirimu aunogona kuona paYouTube maHARA (uye zviri pamutemo) | Ndipei zororo
Gabriela moran | | Cine, Classic cinema, Cinema nemhando
YouTube ichiri imwe yemapuratifomu makuru uye anonyanya kushandiswa iyo inoshanda senzvimbo yekudyidzana. Vashandisi kazhinji vanogovana mavhidhiyo, saka pane mukana wekugona kuona akazara mafirimu mahara. Nekudaro, kune kodzero dzekopimendi uye mimwe mirau inodzikamisa zvirimo zvepeji kuti irege kuwira mukuvhiringidzwa kwemutemo. Nguva ino Ini ndinopa mamwe emamovie aunogona kuona paYouTube mahara uye zviri pamutemo uye kuti ine nzvimbo dzinonakidza. Kana iwe uri fan yemhando yepamusoro mabhaisikopo, haugone kumira kuverenga izvo zvandakagadzirira!
Kunyange chiri chokwadi kuti mapuratifomu ekushambadzira ane chikamu chakakura chemusika pakati pevashandisi, YouTube inomiririra sarudzo yemahara nesarudzo dzisingawanikwe pane mamwe mapuratifomu. Tinogona kuwana zvese kubva kumanyowani kusvika kune makuru emafirimu echinyakare! Ini ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga kuitira kuti iwe utsvage zvakanakisa izvo YouTube zvine mune nyaya ye yakasarudzika mafirimu asiri pasi pekopiraiti.
Sarudzo dzandinopa dzinoenderana nenguva iyo tekinoroji yaive kure kwazvo nezvatinoziva nhasi: vatema uye vachena uye mamwe anoenderana nemamuvhi akanyarara. Zvisinei lHunhu hwenyaya hwakanyanya kwazvo uye hwehunhu husingaverengeke kukosha. Iko kusarudzwa kunoratidza akakodzera mafirimu evatambi vakaita saCharles Chaplin, pamwe neyekutanga vampire firimu, imwe yeanopayona zombie mafirimu anounzwawo, pamwe neanoona nyaya kubva mune ramangwana uye mapenzi nyaya dzinosanganisira mhondi uye hypnosis.
1 Kumhanya kwegoridhe
2 Alarm mune iyo expresso (Mukadzi anoparara)
3 Nosferatu: symphony yekutyisa
5 Husiku hweVakafa Vakafa
6 General Machinist
7 Iyo Cabinet yaDkt Calgary
8 Kune mamwe mafirimu aunogona kuona paYouTube zviri pamutemo?
Yakatanga muna 1925 uye iri nyeredzi yemafirimu icon Charles Chaplin, uyo akanyora zvakare, akatungamira uye akaburitsa iyo firimu. "The Golden Rush" inoonekwa seimwe yemabasa ake ane mukurumbira uye yakagamuchira mazita maviri eOscar pakaburitswa vhezheni muna 1942.
Iyo nharo ndeye zvichibva pakutsikwa kutsvaga goridhe ndokuenda kuKlondike muCanada uko huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakakosha zvakadaro zvaifungidzirwa kuve zviriko. Ari munzira, anoshamiswa nedutu rinomumanikidza kuti apotere mumba yasiyiwa, inova imba yemhondi ine ngozi! Fate inounza muenzi wechitatu mumba uye nekuda kwedutu hapana anogona kusiya nzvimbo.
Vatambi vatatu vanodzidza kugara pamwe chete mune zvavanogona kubva mumba. Mushure memazuva mashoma, dutu rinomira uye mumwe nemumwe anoenderera mberi nenzira yavo yekupedzisira kwaive nechinangwa chimwe chete: kutsvaga mugodhi wegoridhe!
Pakati penzira iyo mufambi wedu anofamba, anosangana neGeorgia. Mukadzi akanaka waanodanana naye asi waanopedzisira aparadzana naye. Iyo nyaya inotitaurira akati wandei mafaro ayo vatambi vedu vanofanirwa kupfuura vasati vasvika pachinangwa chavo chekutanga. Icho chikonzero chekucherechedza kuita kwakanaka kweChaplin uyo aigara achikurudzira vateereri nehunhu hwake hunoshamisa hunoratidza mafirimu ake madema nemachena.
Kupera kwenyaya kunofadza, nekuti protagonist anowana izvo zvaanoda. Zvisinei, pakupedzisira anoona kuti izvo zvaakawana chaizvo zvakakosha kudarika goridhe chairo raaitsvaga.
Alarm mune iyo expresso (Mukadzi anoparara)
Iyo yakanakisa uye yakasarudzika thriller izere nekufungidzira ndiyo rongero remusoro wenyaya uri mubvunzo. Yakaburitswa pahwindo hombe muna 1938 uye New York Times yakariisa iro bhaisikopo rakanakisa regore iro. Iyo firimu yeBritish inotungamirwa naAlfred Hitchcock, iyo nyaya yakavakirwa panoverengeka "Vhiri rinotenderera." Ivo protagonists ndiMargaret Lockwood, Paul Lukas, Basil Radford Redgrave naDame May Whitty.
Iyo zano rinotitaurira rwendo rwekudzokera kumba kwe a vaviri vevaifamba vachidzokera kuLondon, kumba kwavo. Nekuda kwemamiriro ekunze asina kunaka chitima chinomanikidzwa kumira kuitira kuti vafambi vachengetedzwe; vaviri vacho vanofamba vanorara husiku mutaundi riri kure. Chikamu chinonakidza chinotanga riini pavanodzokera kuchitima uye voona kuti mufambi anyangarika. Rwendo rusina kukwana rwekudzokera kumba rwaive rwave kuzochinja kuva hope dzinotyisa!
Mumwe mufambi anova fungidziro. Kubudirira kwenyaya kunozivisa zvakavanzika zvinonakidza zveanopfuura mumwe wavo….
Nosferatu: symphony yekutyisa
Kana iwe uri vampire anoda, iwe unofanirwa kuzviona! Nosferatu ndiyo yekutanga firimu ine chekuita nenyaya yechokwadi yaDracula iyo yakanyorwa naBram Stoker. Kunyangwe paine chokwadi chekuti paive nekukakavadzana uye nedzimwe nyaya dzepamutemo dzemutungamiriri Friedrich Wilhelm Murnau achipesana nevakagara nhaka yenyaya yekutanga, iyi firimu inoonekwa sekutanga kweakanakisa emafirimu mafirimu munhoroondo yemhando yemafirimu.
Vechidiki vaviri vaviri nyeredzi mune nyaya, murume ane zita anonzi Hutter anotumirwa kuTransylvania pane bhizinesi kuvhara chibvumirano naCount Orlok. Paakangoiswa muimba yevaeni imomo, Hutter anowana macabre gwaro rinotaura nezvevampires uye rinomusiya achifarira. Gare gare anoenda kuimba yekuverenga uko kwaanosangana nemuridzi anotadza.
Zuva rakatevera kushanya kwako kuimba yemauto, Hutter anowana mamaki maviri pamutsipa wake izvo zvine chekuita nekurumwa kwezvipembenene. Haana kupa kukosha kukuru kuchiitiko kudzamara danowana kuti aive pamberi pevampire chaiye, Verenga Orlok!
Mavanga pamutsipa wake anotisiira iwo mubvunzo: Ko Hutter zvino achange ave nenyota yeropa imwechete iyo inoshuviwa nemukadzi wake here?
Iyo firimu rakanyarara reGerman rakaburitswa muna 1926 uye iro yakasimudza chokwadi chenyika muna 2026 ndiko kuti, makore zana gare gare!
Iyi firimu inotitaurira nezve kupatsanurwa kwemagariro emakirasi uye rusarura kuti pane zviri pakati pezviviri panogara vashandi pasi pevhu uye zvinorambidzwa kuenda kunze kwenyika. Ndaneta nerusarura nekudzvinyirira uye zvinokurudzirwa nerobhoti, lVashandi vanosarudza kupandukira vane rombo rakanaka. Ivo vakatyisidzira kuparadza guta uye runyararo mune iro rakaropafadzwa kirasi umo vakadzidza nevanhu vane simba rehupfumi vakawanikwa.
Isu tinowana vaviri vanonyanya kutaurwa, mutungamiri kubva kune yega yega kirasi yemagariro, sevamiriri uye magamba. Ivo vanotarisira ckuyananisa zvibvumirano zvinoenderana nekuremekedza uye kushivirira.
Iyo inonakidza kwazvo nzira iyo inoratidzwa yeramangwana kuti nhasi haisisiri kure zvakadaro.
Metropolis inoumba iyo yekutanga firimu kupihwa chikamu che "Ndangariro yeNyika" yakapihwa neUNESCO. Kuzivikanwa kunokonzerwa nekudzika kwakagadziriswa nyaya dzemagariro.
Husiku hweVakafa Vakafa
Iyo inotyisa firimu yakaburitswa muna 1968 uye izvo yakagadzirisa mhando yemafirimu akatarisana ne zombie. Inotorwa nevamwe seyakanakisa firimu muchikamu ichi nekuda kwebasa rakaitwa ne "vanofamba vafa" muchirevo ichi uye zvakakonzera zvakanyanya mafirimu aizoburitswa mushure meizvi. Nekuda kwekubudirira kwakagadzirwa nemusoro wenyaya uyu, saga ine zvitsauko zvitanhatu yakagadziriswa. Iwo ma sequels akaburitswa mumakore 1978, 1985, 2005, 2007 uye 2009.
Iyo yekuvhura firimu, iyo inowanikwa paYouTube, ndeye boka revanhu vanozviwana vasurukirwa parudzi rwekurima uye vachirwira hupenyu hwavo mushure mekunge boka revakafa ramuka kuupenyu. Nyaya inotanga nehama mbiri dzinohwanda munzvimbo iyoyo uye vari kuona kuti havazi ivo chete vari kuedza kurarama.
Yenguva yayo, iyo firimu yakaunza kutya pakati pevateereri nekuda kwezviitiko zvechisimba uye zvisingafadzi zvakaurayiwa neZombies.
Buster Keaton mutambi ane mukurumbira kubva panguva yaCharles Chaplin. Iyo yakanyarara, nhema uye chena firimu iri yemhando yemakomiki. Icho chinogadziriswa chechiitiko chaicho chakaitika panguva yeHondo Yenyika muUnited States muna 1862.
Nhoroondo inotitaurira hupenyu hwe Johnnie Grey, mutyairi wechitima yekambani yeWestern & Atlantic Railroad. Ane kudanana naAnabelle Lee, uyo anomubvunza kuti anyore muchiuto hondo painotanga. Zvisinei, protagonist yedu hazvigamuchirwe nekuti vanoona hunyanzvi hwake sehunyanzvi hunobatsira. Paakadzidza nezvekuramba kwemauto, ANabelle anosiya Johnnie sembwende.
Zvinotora chinguva kuti aimbova mudiwa asangane zvakare muchiitiko chisina kunaka chinoisa hupenyu hwavo panjodzi.
Izvo zvinokodzera kutaura kuti iyo firimu haina kutambirwa zvakanaka panguva yayo yekutanga muna 1926, zvaive kusvika makore gare gare kuti ikawana mukurumbira uye kuti yaionekwa seimwe yemabasa akanakisa akamboitwa nemutambi.
Iyo Cabinet yaDkt Calgary
Isu tinoenderera mberi nerunyararo rudzi uye mune nhema uye chena. Dare remakurukota aDr Calgary firimu rinotyisa reGerman rakaburitswa muna 1920. Liye nyaya inotaura nezve kuuraya kwe psychopath uyo anokwanisa hypnotize uye anoshandisa munhu wekurara kuti apare mhosva idzodzo!
Dr. Calgary ndiye mastermind uyo anotora mukana wehunyanzvi hwake uye kushaya simba kweanorara kuisa pamhando yekuratidza iyo inofadza veko. Nyaya yacho inotaurwazve uye inotaurwa naFrancis, mumwe wevanhu vanonyanya kutaurwa munyaya iyi.
Muzhinji, iyo nyaya yakakomberedzwa neyechitema chinoonekwa chimiro nekuda kwekuti zano racho rinotaura pamusoro pezvinyorwa zvine chekuita neupengo nemitambo yepfungwa. Iyi firimu inoonekwa se rakakura basa reGerman expressionist cinema. Chinyorwa chemufirimu chinoenderana nezviitiko zvevakazvigadzira: Hans Janowitz naCarl Mayer. Vaviri vaive varwira pacifist uye vakaedza kuratidza nenzira yakasarudzika simba raishandiswa nehurumende pamusoro pemauto.Kuti vabudirire izvi, vakagadzira Dr.
Ichokwadi kupokana kwepfungwa kunotamba nepfungwa dzevaoni uye kushamisika nekuda kwenzira iyo nyaya yakafumurwa.
Kune mamwe mafirimu aunogona kuona paYouTube zviri pamutemo?
Chokwadi chiripo! Iwo mazita andakapa iwo kuravira kudiki kwezviri pamutemo zvemukati izvo isu zvatinogona kuwana. Panguva ino ndakatarisa kumafirimu echinyakare akamutsa kufarira kukuru nekufamba kwenguva. Uyezve, kune mamwe azvino zvinyorwa uye mafirimu aripo uye tinogona kuanakidzwa zviri pamutemo uye mahara.
Ini handidi kutaura zvakanaka ndisati ndatanga ndataura kuti kune akawanda manomano ekuwana zvemukati zvemapuratifomu akadai seYouTube, zvisinei, ngatiyeukei kuti dzakawanda zvezviito izvi hazvisi pamutemo. Ngatiedzei kubatsira kune nyika iri nani kudzivirira zviito zvisina hunhu zvinotyora copyright uye izvo zvakare zvakafanirwa nebasa rakabatanidzwa mukugadzira zvigadzirwa zvemufirimu.
Ndinovimba unonakidzwa nesarudzo yemavhidhiyo aunogona kuona paYouTube zviri pamutemo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Mafirimu aunogona kutarisa paYouTube mahara (uye zviri pamutemo)